29.04.2016 comments (4)
Qore: Deeq ali hayaan Norway
Sheeko Xikmad badan oo dhexmartay Dameer iyo Askari!
Hada ka hor baa nin Police ah waxuu rabay in la siiyo fasax, ka dib taliyihii policeka ayuu u tagay si uu uga codsado Maalin fasax ah!
Taliyiii policeka ayaa ku yiri dameerkaas banaanka taagan ma u jeeeda suu yiri haa, hadaad u tagto oo hal mar ka qosliso waxaan ku siin doonaa labo maalmood oo fasax ah.
Ninkii waa u tagey wuuna ka soo qosliyey waxuuna kusoo laabtay taliyihiisii balse taliyaha isagoo yaaban buu yiri h...adaad mar labaad u tagto oo ka soo oysiisid waxaan ku siin doona Hal isbuuc oo fasax ah, ninkii mar labaad buu u tagey wuuna ka soo oysiiyey waxuuna kusoo laabtay taliyihiisii isagoo codsadey balantii balse taliyihii ayaa yiri ka waran hadaan bil kaaga dhigo oo aad ka cayrisid (burisid) dameerkaas meesha,waayahey buu yiri dameerkii buu u tagay wuuna ka cayriyey.
Taliyihii policeka oo yaaban baa waxuu waydiiyey nin yahow waad ku guuleysatay xujooyinkii ee maxaad sameysay oo sadexda marba ku dhahdey dameerka .
Ninkii baa ugu jawaabay markii Kowaad waxaan ku iri waxaan ahay nin police ah oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee somalia saas darteed buu igu qosley dameerka:
Mar kii labaad waxaan ku dhahey Labadii bilood oo la soo dhaafay wax mushaar ah ma qaadan mida hada 10 bisha mareysana ilaa hada wax la ima siin sidaas darteed buu ila ooyey oo iiga naxay dameerka.
Markii sadexaadna waxaan ku dhahay ma rabtaa in aad ila shaqeysid sidaas darteed buu iiga cararey.
Fiiro gaar ah: ka waran hadii dameer uu dareen yeeshay madaxdii dalkana ay cunayaan mushaarka ciidanka hadana ay rabaan in ay nabad ku seexdaan waxaase la sii yaabaa shaqsi hay,ad u shaqeeya oo qaboojiye xafiiska ugu jiro gaariga raaxadana wata guri heer sare ahna ku jira mushaarkana ka daahin markii aan arko isagoo dal dumis ah waxaase la qiirooda markaan arko askari daacad ah 06:00 subaxnimo dresskiisa ciidan so xirtay shaqo ka dhib badan kuwa xafiisyada fadhiya qabanaya maalintaas oo dhan qoraxda u taagan yahey amniga bulshada si u ilaaliyo hadana uu yahey bilaa mushaar ama uusan haysan shiling uu siisto bariis caruur iyo xaasna sii sugayaan.
Hadii mid waliba oo shaqeeya 100&dollar u jaro mushaarka ciidanka dowladna lagu haleynin waxaan qabaa in amniga dalka wax badan iska badali lahaa ee aan u istaagno sidaan xaqlayaasha xaqiran xaqooda u siin laheen.
Come see our products - http://bitcoin-advertising.com
JABBER SPAM - EMAIL SPAM - FORUM SPAM - EMAIL BOMBS - HACKING SERVICE - RANSOMWARE - CALL AND TEXT BOMBS
BTC STEALERS - SPAMING SERVICE - CARDING GUIDES - VISA AND MASTERCARD - PAYPAL,WU,BANK TRANSFERS -
*WILD HACKER CREW* - http://bitcoin-advertising.com
Waxaan idiin shegaya soo qora wax wanaga puntlandi iyo midnimada kashaqaynayaa
Waxadna Oo gatan cid idiin qiimaynaysa maleh hadad puntlandi iyo wanaga iyo horumarka kasocda kasoo horjeedaan rintama idiin sheegayaa aniga mä amiinsani Soomalinomo laakiin waxaan aminsanahay puntland iyo dhulkayga
wax macno leh soo qora
Inta aad Dameer ka hadlaysaan maad soo qortaan wanaaga iyo Horumarka ka socda Puntland.
Madaxweyne Gaas ayaa kusoo guulaystay inuu Mashaariic badan ka fuliyo Puntland sida Dekadda Garacad Airporka Galkacyo, Wadooyinka u dhaxeeya Garacad ilaa Galdogob oo laami lasaarayo.
Laasqoray ,Xaabi ilaa Eyl iyo Garacad oo warshado kaluun laga samaynayo iyo waliba intaasoo wanaag ah oo kale oo soo socda.
Damer ayaad la soo shirtagaysaan ,waligay ma arag Webside ka aragti gaaban Dunida Online